Faransiiska oo heegan geliyay ciidamadiisa dalka iyo dibaduba |
Faransiiska oo heegan geliyay ciidamadiisa dalka iyo dibaduba
Faransiiska ayaa xoojinaya amnigiisa dal iyo dibad-ba kadib markii nin looga shakisan yahay inuu Islaami yahay uu mindi ku dilay seddex qof oo ku sugnaa kaniisad kutaala magaalada Nice ee koonfurta Faransiiska.
Wasiirka arrimaha dibedda Faransiiska Jean-Yves Le Drian ayaa sheegay in khatartu ay meelkasto ka jirto.
Golaha difaaca ee Faransiiska ayaa xoojiyay howlgelinta askarta si ay u ilaaliyaan meelaha caamka ah oo guud ahaan ka kooban kow iyo toban kun. Eedeysanaha kow iyo labaatan jirka ah ee u dhashay Tuniisiya kaasi oo ay booliska toogteen ayaa weli ku jira isbitaalka.
Qoyskiisa ayaa sheegay in wiilkooda uu magaalada Nice yimid maalin un ka hor weerarka, taas oo sare u qaaday tuhunka ah inuu isagu qorsheeyey weerarka iyo in laga yaabo inay dad kale gacan ka geysteen.
Saraakiisha Tunisia ayaa waxay sheegeen in ninkan afar sano ka hor lagu xiray dalkiisa hooyo isagoo loo haystay dambiyo la xiriira dagaal mindi loo adeegsaday.
Mr Macron wuxuu sheegay in tirada askarta loo daad gureynayo inay ilaaliyaan goobaha ay bulshada isugu timaado – sida kaniisadaha iyo iskuulada – inay ka kici doonaan 3,000 ilaa 7,000. Dacwad oogayaasha la dagaalanka argagaxisada ayaa furay baadhitaan, Faransiiska ayaa sare u qaaday heeganka amniga qaranka ilaa iyo heerka ugu sarreeya.
Falkan ayaa ka daba imanaya weerar kale oo horraantii bishan ka dhacay meel u dhow iskuul ku yaal waqooyiga-galbeed ee magaalada Paris. Samuel Paty, oo ah macalin, ayaa qoorta laga jaray maalmo ka dib markii uu tusay kartoon sawirka nabi Muxamed NNKH uu ku sheegay qaar ka mid ah ardaydiisa.
Dilkaas ayaa sare u qaaday xiisadaha ka taagan Faransiiska. Difaaca Mr Macron ee xuquuqda daabacaadda kartoonada iyo iskudayada dowladda ee ku aaddan la dagaalanka islaamka xagjirka ah ayaa ka cadheysiiyay Turkiga iyo wadammo kale oo muslimiin u badan.
Dhanka kale Madaxweynaha Iiran Xasan Rouhani ayaa ka mid ah hoggaamiyeyaasha sida kulul uga jawaabay hadalkii carada abuuray ee kasoo yeeray madaxweyne Macron.